10 एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > 10 एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा
मरुभूमिमा, वा तल संसारको सबैभन्दा ठूलो कोरल चट्टानमा, उत्तरी बत्ती अन्तर्गत, यी हुन् 10 जीवनमा एक पटक गन्तव्यहरू. त्यसैले, यदि तपाईं केन्यामा अविस्मरणीय साहसिक कार्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने, वा मंगोलिया र मस्को बीच कहीं, त्यसपछि तपाईंले यी ठाउँहरू जाँच गर्नुपर्छ.
1. मासाई मारा राष्ट्रिय रिजर्व, केन्या
विश्वभरका अन्तिम जंगली र महाकाव्य ठाउँहरू मध्ये एक, मसाई मारा राष्ट्रिय रिजर्व जीवनमा एक पटक गन्तव्य हो. सभ्यताले नछोएको, मसाई मारा एक उत्कृष्ट सफारी गन्तव्य हो. यसबाहेक, द प्रकृति रिजर्व संसारको सबैभन्दा ठूलो बसाइसराइको घर हो, हरेक आगन्तुक मा छाप छोडेर. त्यसैले, महान बसाई को साक्षी; जंगली बिरालोहरू, जेब्राहरू, र अन्य धेरै जंगली जनावरहरू केही मिटर टाढा तिनीहरूको प्राकृतिक भव्य बासस्थानमा जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव हो।.
त्यसैले, यदि तपाईं संसारको सबैभन्दा लुभावनी प्रकृति भण्डारहरू मध्ये एकमा जीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक कार्यमा जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तातो हावाको बेलुनमा वा 4X4 मार्फत आकाशमा यात्रा गर्ने बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ. यद्यपि, तपाईंले जुलाई र सेप्टेम्बर बीच आफ्नो सफारी छुट्टी योजना गर्नुपर्छ, केन्याको सडक र भूमिमा शासन गर्ने सबैभन्दा शानदार जंगली जनावरहरूको बथानको साक्षी दिन, प्रवास को समयमा.
2. एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा: माचु पिचु
एन्डिज पर्वतमा लुकेको छ, माचु पिचु सहर छोडियो तर बिर्सिएको छैन. इन्का साम्राज्यका सुन्दर अवशेषहरू शताब्दीयौंदेखिको जंगली मौसममा बलियो छन्, हरेक दिन आउने हजारौं आगन्तुकहरूलाई पेरुभियन साम्राज्यको रहस्य साझा गर्न तयार छ, पैदल, बस, र ट्रेन.
माचु पिचु भ्रमण गर्दा, तपाईं पुरानो सहरको आकार र स्थानबाट छक्क पर्नुहुनेछ. कसरी यो महान शहर पेरू मा कतै को बीच मा निर्माण र संरक्षित गरियो, रहस्य नै रहन्छ. यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो रहस्य भनेको त्यहाँका बासिन्दाहरूले माचु पिचुलाई त्याग्नुको कारण हो. त्यसैले, तपाईंलाई परिसरमा धेरै निर्देशित भ्रमणहरूमा सामेल हुन र पत्ता लगाउने प्रयास गर्न स्वागत छ. यसबाहेक, तपाईंले संसारको सबैभन्दा मनमोहक संस्कृति र ठाउँहरू मध्ये एकको झलक पाउनुहुनेछ. यसरी, ASAP मा माचु पिचुको आफ्नो जीवनकालमा एक पटकको यात्रा बुक गर्न निश्चित हुनुहोस् 2022.
3. मस्को देखि मंगोलिया सम्म ट्रान्स-मंगोलियन ट्रेन
विश्वभरका दुईवटा अविश्वसनीय गन्तव्यहरू साइबेरिया र मंगोलिया हुन्. आधुनिक रेल यातायात को लागी धन्यवाद, आज एकै यात्रामा दुवै ठाउँमा यात्रा गर्न सकिन्छ, ट्रान्स-मंगोलियन ट्रेन मार्फत. मस्को प्रस्थान गर्दै, सेन्ट मार्फत. पिटर्सबर्ग र ताल बैकल, गोबी मरुभूमि, र बेइजिङ आइपुगे, ट्रान्स-मंगोलियन एक अद्भुत यात्रा हो.
न केवल तपाईंसँग ट्रेनमा तपाईंको झ्यालबाट अद्भुत दृश्यहरू हुनेछन्, तर तपाईंसँग पार गर्ने दुर्लभ मौका हुनेछ6समय क्षेत्रहरू. जबकि यो एक हो संसारमा सबैभन्दा लामो रेल सवारी, ट्रान्स-मंगोलियन रेल यात्रा लिन लायक छ. त्यसैले, यदि तपाईं जीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक कार्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले अर्को गर्मीको लागि यो जीवनभरको गन्तव्यको लागि आफ्नो यात्राको योजना सुरु गर्नुपर्छ.
4. एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा: Tromso, नर्वे
अरोरालाई भेट्नु जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव हो र यस महाकाव्य भेटको लागि उत्तम ठाउँ ट्रोम्सो सहरमा छ।. अरोरा क्षेत्रको मुटुमा, नर्वेजियन आर्कटिक मा, तपाईं संसारमा सबैभन्दा शानदार ध्रुवीय बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ. सर्पिलहरू, किरणहरू, पर्दा, र प्राकृतिक प्रकाश को झिलमिलाहट ध्रुवीय प्रकाश को अभिव्यक्ति हो, अग्लो स्थानहरूमा मात्र देखिन्छ, आर्कटिक र अन्टार्कटिक क्षेत्रहरू जस्तै.
बस 5.5 लन्डन देखि रेल द्वारा घण्टा, यो जीवनमा एक पटक गन्तव्य पुग्न धेरै सजिलो छ. यसको अचम्मको केन्द्रीय स्थान, उत्कृष्ट पबहरू, र रेस्टुरेन्टहरूले संसारभरका यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्छन्. तपाईको सपनालाई वास्तविकतामा साकार पार्ने उत्तम समय नर्वेमा उत्तरी लाइटहरूको उत्कृष्ट दृश्यहरूको लागि डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म हो।.
5. बाली, इन्डोनेशिया
उष्णकटिबंधीय, हरियो, शान्त, बाली पृथ्वीमा स्वर्ग र शीर्ष मध्ये एक हो5जीवनमा एक पटक गन्तव्यहरू. पुरातन मन्दिरहरूको घर, बालिनी संस्कृति, आश्चर्यजनक पर्यावरण मैत्री छुट्टी भाडा, र आवास, लुकाउने दृश्यहरु संग, बाली एक अविस्मरणीय यात्रा गन्तव्य हो.
यसरी, बालीका यात्रुहरूले संसारको सबैभन्दा जादुई दृश्य र वातावरण अनुभव गर्छन्, ल्यान्डस्केपहरू उल्लेख नगर्नुहोस् जसले गौरवशाली प्रकृतिको अगाडि एकलाई अवाक र विस्मयमा छोड्छ. साथै, हरियाली उपत्यकाहरू, र शानदार झरने, पोस्टकार्ड जस्तो छवि र सबै जान चाहने ठाउँ सिर्जना गर्नुहोस्, जीवनमा कम्तिमा एक पटक.
6. एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा: ग्रेट ब्यारियर रीफ, अस्ट्रेलिया
तन्काउँदै 900 टापुहरू र अधिक 2000 मी, अष्ट्रेलियाको ग्रेट ब्यारियर रीफ कुनै पनि गोताखोर र स्नोर्कलिंग उत्साहीका लागि काल्पनिक गन्तव्य हो।. अविश्वसनीय कोरल चट्टान क्वीन्सल्याण्ड मा छ, जहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ 1500 माछा प्रजातिहरु, अचम्मको जीव, र भव्य कोरलहरू.
ग्रेटर ब्यारियर रीफ समुद्रमुनिको वन्डरल्याण्ड हो. त्यसैले, यदि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अझै पनि केही प्रागैतिहासिक प्राणीहरू तपाईंको छेउमा पौडी खेलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले, आफ्नो बैग प्याक, स्नोर्कलिंग वा स्कूबा डाइभिङ गियर, अष्ट्रेलियाको ग्रेट ब्यारियर रीफको जीवनमा एक पटकको यात्राको लागि.
7. क्यापाडोसिया, टर्की
टर्कीको क्यापाडोसिया माथि तातो हावाको बेलुनमा सवारी गर्नु एक दिमाग उडाउने साहसिक कार्य हो. यसबाहेक, जब तपाईं हावामा हुनुहुन्छ, तपाईंले अन्य रंगीन तातो हावाका बेलुनहरू र क्यापाडोसियाको ज्वालामुखी परिदृश्य देख्नुहुनेछ. यद्यपि, यदि तपाईं उचाइ देखि डराउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको होटल कोठा वा बाहिरी क्याफेबाट तातो हावाका बेलुनहरू हेर्दै, एक अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ.
बादलमा हुनुको एड्रेनालाईन भीडको अतिरिक्त, तपाईंले क्यापाडोसियाको अद्वितीय भूमिको भव्यता देख्नुहुनेछ. उदाहरण को रुपमा, भिक्षु उपत्यका चिम्नी आकारको चट्टान संरचनाहरूले भरिएको छ जुन भूमि भरि खडा छ. यसबाहेक, कांस्य युगका घरहरू र चर्चहरू पहाडहरूमा कोरिएका छन्, Cappadocia मा भ्रमण गर्न उल्लेखनीय साइटहरू छन्. यसलाई संक्षेप गर्न, क्यापाडोसिया तपाईंले संसारमा कतै नदेख्ने ठाउँहरूको घर हो.
8. एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा: स्विस आल्प्स
स्विस आल्प्स वर्षको कुनै पनि समयमा एक अविस्मरणीय गन्तव्य हो, तर जाडोमा तिनीहरू विशेष गरी सुन्दर हुन्छन्. वसन्त र गर्मीमा तपाईं पैदल यात्रा र बाहिरी खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, जाडोमा तपाईंले स्नोशूइङ प्रयास गर्नुपर्छ. हो, स्नोशुइङ एक अद्वितीय जाडो खेल हो, र उचित जुत्ता संग, तपाईं अधिक अल्पाइन परिदृश्य अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ.
अनुपम जाडो खेल वरिपरि सुरु भयो 6,000 वर्ष पहिले र हिउँले भरिएको स्विस आल्प्समा धेरै लोकप्रिय भएको छ. Chamonix र Mont Blanc देखि Ecrins सम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्नोशुइङ गर्दा तपाईं सबैभन्दा सुन्दर हिमाल दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. कुरा माथि योग, स्विस आल्प्सलाई बकेट-लिस्ट गन्तव्यको रूपमा चिनिन्छ, तर स्नोशुइङले यसलाई एउटा बनाएको छ 10 जीवनमा एक पटक गन्तव्यहरू.
9. प्याटागोनिया, अर्जेन्टिना
हिमनदी, रमणीय पहाड चुचुराहरू, वन, पुरानो लगूनहरू, अर्जेन्टिना मा Patagonia एक पैदल यात्रा स्वर्ग हो. यसबाहेक, ट्रेल्स र शानदार दृश्यहरूले भरिएको, Patagonia को राष्ट्रिय ग्लेशियर पार्क उत्तरी अमेरिका मा एक पटक-मा-एक जीवनकाल गन्तव्य हो.
यसका अतिरिक्त क्लासिक पैदल यात्रा ट्रेल्स, धेरै साहसी यात्रुहरूले रियो नेग्रो ग्लेशियर चढ्न सक्छन्, उदाहरण को लागी. अर्को शब्दमा, तपाईं आफूलाई जमेको माथि चढेको पाउन सक्नुहुन्छ, एड्रेनालाईन र अद्वितीय अनुभव को लागी हिउँ पहाड. यो केवल एक असाधारण चीज हो जुन तपाईंले अद्भुत Patagonia मा गर्न सक्नुहुन्छ.
10. एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरूमा: जापान
मध्य मार्च र अप्रिलको बीचमा जापानमा सुन्दर गुलाबी र सेतो चेरी फूलहरू फुल्छन्. साकुरा ब्लोसमले क्योटोलाई रंग दिन्छ, टोक्यो, र अन्य शहरहरू जादुई वातावरण र खुशीमा. निस्सन्देह मनमोहक, Sakura फूल को समयमा, जापान निद्रामा परेको छ, जापानको उच्च गतिको जीवनलाई विशेष शान्तिले समेट्छ. यो अनौठो वातावरणले वसन्त बिदाको लागि जापान भ्रमण गर्ने लाखौं आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ.
यसरी, यदि तपाईंले कहिल्यै जादुई समयको लागि टाढा यात्रा गर्ने मौका पाउनुभयो भने, त्यसोभए जापानमा वसन्त भ्रमणको लागि उपयुक्त समय हो. प्रयास गर्नुको साथै स्थानीय खाना, स्वर्ण मन्दिरहरु को भ्रमण, र मन छुने टोकियो गगनचुम्बी भवनहरू, Sakura रूखहरू मुनि पिकनिक मनाउनु जीवनमा एक पटकको अनुभव हो.
हामी मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् तपाइँ यी को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 10 एक पटक लाइफटाइम गन्तव्यहरू विश्वव्यापी रूपमा.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोस्ट "10 एक पटक जीवनभर गन्तव्यहरूमा" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)